🥇 Mmemme maka akpaaka dentistry
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 793
Video nke mmemme maka akpaaka dentistry
Nye iwu ka mmemme dentistry rụọ ọrụ
Dentistry akpaaka na-emepe emepe ngwa ngwa n'ihi nnweta teknụzụ akpaaka. A usoro nke dentistry akpaaka, nke bụ otu n'ime teknuzu ụzọ nke akpaaka dentistry dị ka ụdị nke okirikiri nke azụmahịa ọrụ, na-eji, kama ọ bụ obere. Nwere ike ịchọta usoro mmemme akụrụngwa ezé na ịntanetị, mana ha niile chọrọ ịkwụ ụgwọ oge niile ka enyere ha ohere ịrụ ọrụ na ya, ma ọ bụ naanị enweghị nnukwu ọrụ nke mmadụ ga-achọ ịhụ na ngwa dị ka nke ahụ. Ewezuga ihe dị n’elu bụ USU-Soft - ọgbọ ọhụụ toro usoro eji arụ ọrụ ezé. USU-Soft jikọtara atụmatụ niile ndị ọchụnta ego ga-enwe obi ụtọ ịhụ na akpaaka ezé. Ihe omume nke dentistry akpaaka dị mfe iji na-adịghị eme kwa ọnwa chọrọ nke ndenye aha ụgwọ na-arụ ọrụ na ya. Dentistry akpaaka omume na-arụ ọrụ ọbụna na a dị mfe n'ụlọ kọmputa na ọ dịghị pụrụ iche akụrụngwa dị mkpa maka ya. The ọma nke ọrụ bụ nnukwu uru, ebe ọ bụ na usoro ihe omume nke dentistry akpaaka nwere ike ịhụ onye na-eru nso ọrụ nke ọ bụla dentistry ụlọ ọgwụ na-ewebata akpaaka na ya ụzọ. Site n'enyemaka nke usoro mmezi ezé eze, ị na-achịkwa oge ndị ọrụ na-arụ ọrụ, soro ndị ọrịa nwee nkwekọrịta, na-achịkwa ọgwụ, gbakọọ mmefu maka ịnye ọrụ, yana ị na-arụ ọrụ na ọtụtụ ndepụta ọnụahịa na otu dị iche iche nke ndị ahịa otu ugboro.
USU-Soft dentistry automation program anaghị achọ ọtụtụ ihe na kọmputa gị ma chọọ naanị ohere iji nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma. You nwere ike ịchekwa ozi dịka nnomi ndabere na draịva USB mgbe niile, ka ọ bụrụ na ihe mere, ị ga - enweta ozi gị ngwa ngwa. Ọzọkwa, usoro ihe omume nke eze na-arụ ọrụ ezé na-agwa ndị na-edekọ ego, ndị na-ebi akwụkwọ ego, nke n'aka nke ya, na-eme ka ọsọ ọsọ nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ ma na-enye gị ohere ịnye ha akwụkwọ ego dị ka ụgwọ akaebe maka ọrụ. Site na enyemaka nke USU-Soft program of automation dentistry, ị na-eguzobe njikwa na nhazi usoro nhazi nke nhazi nke na-arụ ọrụ n'ụzọ nkịtị na akpaka. N'otu oge ahụ, iso ndị ọrịa na-arụ ọrụ na-adị ngwa ngwa, na-enye gị ohere ijere ọtụtụ mmadụ ọrụ. Nke a ga - enyere gị aka itolite onye ndu n’etiti ndị na - azọ ya ma nweta nnukwu ego.
Iji mee mkpebi iji gbanye ụlọọgwụ, ịkwesịrị ịmara uru elele nke teknụzụ ndị a. Anyị ga-depụta, na uche anyị, isi uru (akụ na ụba na ndị ọzọ) na a eze ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ na ahụ ike center nwere ike inweta site na mmejuputa nke akpaghị aka management mmemme nke dentistry akpaaka. Enwere ike ịba uru ndị a n'ime nsogbu ndị bụ isi. Nke mbụ, ọ bụ mwepu ma ọ bụ mbenata egwu nke ụlọ ọrụ ahụ site n'aka ndị ọrụ na-enweghị isi (ndị na-akpọ ndị ọrịa maka ọgwụgwọ a na-akwụ ụgwọ n'ụlọ ọgwụ ndị ọzọ, ịnye ọrụ ndò, ihe mkpofu nke ihe oriri). Nke abuo, ọ bụ ịdọ aka ná ntị gbasara ego nke ndị ọrịa (dị ka omume na-egosi, na enweghị njikwa kwesịrị ekwesị site na nchịkwa ahụ, ịkwụghị ndị ọrịa ụgwọ nwere ike ibute ụlọ ọrụ ahụ nnukwu mmebi ego). soro ndị ahịa rụọ ọrụ (nyocha mgbochi, kpọọ ka ị gaa n'ihu ọgwụgwọ); Mbelata ndị ọrịa na-anaghị abịa site na ekwentị na ihe ncheta SMS
Ọtụtụ mgbe ndị dọkịta nọ n'ụlọ ọgwụ adịghị achịkwa ịkwụ ụgwọ ọrịa, na-ahapụrụ ya akọ na uche nke nlekọta ahụ. Nke a nwere ike ịbụ ihe ziri ezi, ebe ọ bụ na dọkịta kwesịrị inwekarị mmasị na usoro ọgwụgwọ. Usoro ihe omume kọmputa nke dentistry automation na-enye gị ohere iji nlezianya soro ndị ji ụgwọ, chetara ha ụgwọ ha na nleta ndị ọrịa na-esote, na ịdebe oge nke usoro mkpuchi ha. Kedu otu esi echebe onwe gị pụọ na ọnwụ? Usoro ihe omume nke eze na-arụ ọrụ ezé nwere ike ichetara ụgwọ ahụ ọ bụghị naanị n'oge ndebanye aha nke ọrụ ndị a sụgharịrị, kamakwa n'oge ọbịbịa nke onye ọrịa ma ọ bụ ọbụna n'oge ndebanye aha onye ọrịa na oge ahụ. Nke a na-enye onye nchịkwa ohere ichetara onye ọrịa banyere ụgwọ ahụ n'oge, ma nwee ike yigharịrị ọrụ ndị ọzọ dị oke ọnụ ruo mgbe akwụ ụgwọ ahụ. Modul pụrụ iche ('Ahịa') na - enye gị ohere ịhọrọ ndị ji ụgwọ ka gị na ha rụọ ọrụ kpọmkwem iji mechie ụgwọ ahụ. Ihe USU-Soft program nke automation dentistry na-echetara banyere mmemme mkpuchi kubie ume.
Anyị na-enye usoro mmemme dị mma nke na-ewepụta akụkụ niile nke ụlọ ọgwụ eze na ihe niile na ọnụahịa dị ọnụ ala. Ngwa USU-Soft nwere modulu sọftụwia dị ọnụ ala nke ogo dị elu nke enwere ike rụọ ọrụ nhọrọ ma ọ bụ dịka ọ dị mkpa. A na-azụta modulu ahụ otu ugboro na enweghị ụgwọ ịdenye aha iwu.
Enwere ike ịkpọ ngwa USU-Soft dị ka eluigwe na ala, ebe enwere ike gbanwee ya na azụmaahịa ọ bụla. Anyị enyochaala ọtụtụ mmemme yiri nke a, tụlere mmejọ nke ọtụtụ ndị mmemme na-eme wee kwubie na sistemụ anyị ga-adị mfe dịka o kwere mee, iji mee ka usoro ịrụ ọrụ na ya dị mfe ma ghara ịdị mgbagwoju anya. N'ihi ya, ị nweta usoro nke nwere ike ime ka usoro ọrụ rụọ ọrụ nke ọma, site na ogo ọhụrụ nke ọsọ na izi ezi. Ikike nke ngwa a enweghị ike ịju gị anya site na ike akpaaka nke teknụzụ ọgbara ọhụrụ. Naanị teknụzụ dị elu nwere ike ijide n'aka na mmepe nke ụlọ ọrụ gị.